लामो समय सम्म यौन सम्पर्क गर्नको लागि प्रयोग गर्नुस् निकै प्रभाव कारी घरेलु औषधि !! जानी राखौ
- नेपाली सन्देश शनिबार, बैशाख ८, २०७५ , 7.3K जनाले हेर्नुभयो
आजकल धेरै मानिस यौनसम्बन्धी कमजोरीबाट पीडित रहेको पाइन्छ । नपुंसकता, स्पनदोष, धातु दोष तथा सिघ्र स्खलन आदि । यसका अनेक कारण छन्, जस्तो कि हस्तमैथुन, अत्याधिक उत्तेजनायुक्त फिल्म हेर्नु, उत्तेजक लेख पढ्नु, असंयमित खानपान, शरीरमा पोशक तत्वको कमी आदि ।
तर, बजारमा यौन समस्या समाधान गर्ने भनेर थरी-थरीका औषधि पाइन्छन् । तर के तपाईंलाई थाहा छ, सिघ्र स्खलनसहितका यी तमाम यौन समस्याहरु घरेलु औषधि प्रयोग गरेर नै समाधान गर्न सकिन्छ नि ! सुन्दा सामान्य लाग्ने यो घरेलु औषधि निकै नै प्रभावकारी छ । तर, यसको प्रयोगमा नियमितता भने अवस्य चाहिन्छ ।
यस्तो छ औषधि
एउटा स्याउ लिनुहोस् । अब यसमा जतिसक्दो धेरै ल्वाङ गाड्नुहोस् । यस्तै अर्को एउटा भेटेसम्म ठूलो कागती लिएर आउनुस् । यसमा पनि जतिसक्दो धेरै ल्वाङलाई गाड्नुहोस् । तलको चित्रमाजस्तै ल्वाङ गाड्नका लागि टूथपिकको सहयोग लिन सकिन्छ ।
यसरी ल्वाङ गाडिएको स्याउ र कागतीलाई भाँडोमा राखेर राम्रोसँग छोप्नुहोस् । अनि एक हप्तासम्म कुनै चिसो ठाउँमा लगेर जतनसाथ राख्नुहोस् । चिसो ठाउँमा यसकारण राख्नुपर्छ कि स्याउ र कागती खराब हुन नपाओस् ।
एक सातापछि स्याउ र कागती दुवैबाट ल्वाङलाई निकाल्नुहोस् ।
यसरी निकालिएको ल्वाङलाई काँचको फरक-फरक सिसीमा हालेर राख्नुहोस् । अब यसरी तयार भएको ल्वाङ दैनिक दुईवटाको दरले खानुपर्छ । पहिलो दिन कागतीबाट निकालिएको दुई ल्वाङ मसिनो बनाएर पिस्नुहोस्, अब यसलाई बाख्राको दूधमा मिसाएर पिउनुस् ।
यदि बाख्राको दूध पाइन्न भने गाईको शुद्ध घिउ पनि प्रयोग गर्न सकिन्छ । फेरि अर्को दिन स्वाउबाट निकालेको दुई ल्वाङलाई पिसेर त्यसैगरी खानुहोस् ।
यसरी दैनिक पालैसँग फरक-फरक सिसीको ल्वाङ दुई/दुईवटाको ४० दिनसम्म खाँदा तपाईंका अधिकांश यौन समस्या समाधान हुनेछन् ।
साथै यौन क्षमता पनि दोब्बर हुनेछ । यो निकै नै प्रभावकारी आयूर्वेदिक औषधि प्रयोगमा नियमितता चाहिन्छ । नियमितताले नै यसलाई प्रभावकारी ढंगले काम गर्न सघाउँछ ।
बार्सिलोनालाई एकपछि अर्को धक्का, दुई महत्वपुर्ण खेलाडी चोटग्रस्त
कास्कीमा निषेधाज्ञा हट्यो, पठनपाठन र रात्रिकालीन व्यवसाय खुल्यो
घाँटी रेटिएको अवस्थामा मृत फेला बिसी, हत्यारा सार्वजनिक गर्दै
घाँटी रेटिएको अवस्थामा शव भेटियो शिक्षक बिसीको
नेपाली बजारमा दुई स्मार्टफोन, सस्तो मूल्यमा रियलमी ‘सी’ सिरिजका
प्रेममा पर्नुभएको छ, तपाईंले फोनमा गरेका कुरा अब सरकारले सुन्नेछ’
इन्टरनेट र टेलिफोन शुल्क: संसारमा घट्दै, नेपालमा बढ्दै !
चीनले यसरी गर्दैछ विकट क्षेत्रको कायापलट विद्यालय
नेपाली सन्देश अनलाइन मिडिया प्रा.लि
दर्ता नं : १८४८२९/०७४/०७५
पोखरा , नेपाल
फोन नं : ९८०३४०३६१७, ९८१५१४०८६४
इमेल : [email protected]­om
सम्पादक : लक्ष्मण परियार
संचालक : सोम परियार
मिन कुमार राइ
Copyright © 2021 Neaplisandes.com :: All Right Reserved